ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက် မီးလောင်မှု - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤ ဆောင်းပါး သည် လတ်တလော current disaster ကို တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးပါ သတင်း အချက်အလက်များ သည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ (September 2018)
မီးလောင်နေသော ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက်
ဒေသအချိန် ၁၉:၀၀; 23:00 UTC
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၉-၀၂)
Paço de São Cristóvão, ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့
22°54′21″S 43°13′34″W﻿ / ﻿22.90583°S 43.22611°W﻿ / -22.90583; -43.22611ကိုဩဒိနိတ်: 22°54′21″S 43°13′34″W﻿ / ﻿22.90583°S 43.22611°W﻿ / -22.90583; -43.22611
ပြတိုက် စုဆောင်းမှုများ၏ ၉၂.၅ %
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့ရှိ ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသော Paço de São Cristóvão အဆောက်အအုံတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါပြတိုက်တွင် ပစ္စည်းပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပျက်စီးခဲ့သည်။ ဘရာဇီးသမ္မတ မီချယ်တီမာ က နိုင်ငံအတွက် "ရေတွက်မရနိုင်သည့်" သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၇ နာရီခွဲတွင် စတင်ခဲ့သော မီးလောင်မှု၏ အကြောင်းရင်းကို မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပေ။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက်
အဆောက်အအုံသည် Quinta da Boa Vista ဥယျာဉ်တွင် တည်ရှိသော São Cristóvāo နန်းတော်အဆောက်အအုံဖြစ်ကာ ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းက တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီတော်ဝင်မိသားစုသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုအဆောက်အအုံတွင် ဧကရာဇ် Pedro I နှင့် Pedro II တို့ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံ သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး သုံးနှစ်အကြာ ၁၈၉၂ ခုနှစ်တွင် ပြတိုက်အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်က တွေ့မြင်ရသော အမျိုးသားပြတိုက် အဆောက်အဦ
ပြတိုက် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော Luiz Fernando Dias Duarte က ပြတိုက်အနေဖြင့် အစိုးရအဆက်ဆက် မျက်ကွယ်ပြုမှုများကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ပြတိုက်တွင် မီးခိုးငွေ့ ထောက်လှမ်းကိရိယာများနှင့် မီးသတ်ဆေးဘူး အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း အလိုအလျောက် ရေဖြန်းစနစ်များ မရှိခဲ့ပေ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်မှုများကြောင့် ပြတိုက်အနေဖြင့် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် တစ်နှစ်လျှင် R$520,000 ကို လက်ခံရရှိခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကို လစာမပေးနိုင်တော့သဖြင့် ပြတိုက်ကို ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ရသည်။ ပြခန်းများ ပြင်ဆင်စရိတ်အတွက် လူထု၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတါင်း ပြတိုက်ထိန်းသိမ်းမှု ဘတ်ဂျက်၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြတိုက် နှစ် ၂၀၀ ပြည့် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သေးသည်။
ပြတိုက်တွင် နှစ် ၁၁,၀၀၀ ကြာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတလျောက်မှ ပစ္စည်းပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်စေသော ပစ္စည်းများအပါအဝင် ဘရာဇီးသမိုင်းအတွက် အရေးပါသော ရှေးပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ပြတိုက်၏ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများတွင် လူဇီယာ အမျိုးသမီး၏ အကြွင်းအကျန်များ၊ Maxakalisaurus ၏ ရုပ်ကြွင်းနှင့် ပွန်ပေနံရံဆေးရေးပန်းချီ စုဆောင်းမှုများ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြတိုက်ပိတ်ပြီး များမကြာမီ Quinta da Boa Vista ဥယျာဉ်တွင်းရှိ အမျိုးသားပြတိုက် အဆောက်အအုံ၏ သုံးထပ်စလုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၇ နာရီခွဲတွင် မီးသတ်သမားများထံ သတင်းရောက်ရှိခဲ့ပြီး မီးလောင်ရာနေရာသို့ အမြန် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
၉ နာရီ အချိန်တွင် မီးတောက်များ ပိုမိုကြီးမားလာကာ ပြိုကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ လောင်ကျွမ်းမှုသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုကို ကြည့်ရှုရန် လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာ Quinta da Boa Vista သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် မီးသတ်အထူးအဖွဲ့သည် အဆောက်အအုံအတွင်း ဝင်ရောက်ကာ မီးမလောင်သေးသည့် နေရာများကို မလောင်ကျွမ်းနိုင်စေရန် ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
၉ နာရီခွဲအချိန်တွင် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို မီးက ဝါးမျိုသွားခဲ့သည်။ ပြတိုက်တွင် လုပ်ကိုင်ကြသော အစောင့်လေးဦးစလုံး လွတ်မြောက်ရာသို့ ပြေးထွက်နိုင်ခဲ့ကြပြီး သေဆုံးမှုများ မရှိခဲ့ပေ။
၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်တွင် မီးသတ်သမားသုံးဖွဲ့သည် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ လှေကားအရှင်ပါသော မီးသတ်ကားနှစ်စီးနှင့် ရေသယ်ယာဉ်နှစ်စီးကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
၁၀ နာရီအချိန်တွင် ပြတိုက်ဝန်ထမ်း ဒါဇင်ကျော်ခန့်က မီးငြိမ်းသတ်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြသည်။ အဆောက်အအုံ၏ အထပ်နှစ်ထပ် ပျက်စီးပြီးဖြစ်ကာ မျက်နှာကြက်များ ပြိုကျခဲ့သည်။ ပျက်စီးမှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့သူ ပြတိုက်ဝန်ထမ်းနှင့် စာကြည့်တိုက်မှူးဖြစ်သော အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် Edson Vargas da Silva က "စာရွက်တွေ၊ သစ်သားကြမ်းခင်းတွေ တအားများပြီး အလျင်အမြန် လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်" ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Sha-Amun-em-su မံမီရုပ်ကြွင်း
ပြတိုက် တရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုအရ စုဆောင်းမှုများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မီးသတ်သမားများနှင့် ပြတိုက်ဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း မီးသတ်ဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။ အေဒီ ၇၉ ခုနှစ် ဗီဇူးဗီးယက် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ပွန်ပေမှ ရိုမန်နံရံဆေးရေးပန်းချီကို မီးလောင်မှုတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ပြတိုက်အတွင်းတွင် သိပ္ပံဆိုင်ရာ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ရှားပါးဖန်တီးမှု ထောင်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့သည်။ ပြတိုက်အနီး လမ်းများပေါ်တွင် မီးလောင်ထားသော စာရွက်များ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း လူမှုကွန်ယက်တွင် မျှဝေမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ဌာနေရင်း ဘာသာစကားများနှင့် ပတ်သက်သော စုဆောင်းမှုများသည် မီးလောင်မှုတွင် လုံးဝ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် ပတ်သက်သော အသိပေးချက် - ပေါ်တူဂီဝီကီပီးဒီးယားအဖွဲ့၏ ပြတိုက်နှင့် ဆက်စပ်သော ဓာတ်ပုံများ စုဆောင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ပရောဂျက်အကြောင်း
↑ "Museu Nacional: 1,5 milhão de peças escaparam do incêndio por estarem em outros prédios" (in pt)၊ O Globo၊6September 2018။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Phillips၊ Dom (3 September 2018)။ '200 years of knowledge lost': fire engulfs Brazil's national museum။
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Brazil museum fire: Treasures at risk" (in en-GB)၊ BBC News၊3September 2018။
↑ Fire at Brazil National Museum engulfs 200-year-old building (2 September 2018)။
↑ "Vice-diretor do Museu Nacional cita 'descaso' de vários governoseque incêndio destruiu tudo" (in pt)၊ G1၊2September 2018။
↑ 'A tragedy foretold': Brazil museum had no sprinkler system။ Newshub။6September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Double Blow to Brazil Museum: Neglect, Then Flames။ New York Times။6September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Fire Devastates Brazil's Oldest Science Museum"၊3September 2018။
↑ "Incêndio atinge o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio. Mais antigo do país, museu tem 20 milhões de itenseapresentava problemas de manutenção" (in pt)၊ Folha de São Paulo၊ September 2, 2018။ September 2, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Incêndio atinge Museu Nacional, no Rio - Brasil" (in pt)၊ Estado de S.Paulo၊ September 2, 2018။
↑ "‘A lobotomy of the Brazilian memory’: Devastating fire destroys Rio’s National Museum"၊ The Washington Post၊3September 2018။
↑ CNN၊ Claudia Dominguez, Flora Charner and Holly Yan,။ "Inferno at Brazil's National Museum causes 'irreparable' damage and grief"၊ CNN။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Brazil museum fire: Outrage grows as government blamed for 'tragic' blaze။3September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fire engulfs 200-year-old Brazil museum (September 2, 2018)။ September 2, 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 2, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rio's 200-year old National Museum hit by massive fire (September 2, 2018)။ September 2, 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 2, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Incêndio de grandes proporções atinge o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre as causas do fogo, que começou após o fechamento do museuavisitantes. Instituição criada por Dom João VI tem 200 anos de história." (in pt)၊ G1၊ September 2, 2018။ September 2, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Incêndio destrói prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro" (in pt)၊ VEJA.com၊ September 2, 2018။ September 2, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Incêndio atinge Museu Nacional, no Rio" (in pt)၊ Terra Online၊ September 2, 2018။
↑ "Incêndio no Museu Nacional destrói coleçõeseexposições" (in pt)၊ Agência Brasil၊ September 2, 2018။
↑ "Parte do teto do Museu Nacional já desabou com incêndio" (in pt)၊ ISTOÉ Independente၊ September 2, 2018။
↑ Kobeissi, Kamal (4 September 2018)။ Mummy of Ancient Egypt singer engulfed in Rio de Janeiro museum fire။ Al Arabiya။6September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brazil museum fire: Funding sought to rebuild collection။ BBC။4September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ""Cultural tragedy": Massive inferno engulfs 200-year-old museum in Brazil" (in en)။
↑ "Priceless Roman fresco, artefacts destroyed in Rio de Janeiro museum fire" (in en-AU)၊ ABC News၊3September 2018။
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ Brazil's national museum: What could be lost in the fire?။3September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons ရှိ ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက် မီးလောင်မှု နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘရာဇီး_အမျိုးသားပြတိုက်_မီးလောင်မှု&oldid=421695" မှ ရယူရန်
September 2018 မှ လတ်တလော ဖြစ်ရပ်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။